Xiaomi wuxuu ku soo bandhigayaa Xiaomi Mi A2 Android One, in kasta oo aan la maqal maqal | Androidsis
Xiaomi Mi A2 hadda waa rasmi: dhexdhexaad weyn, inkasta oo aan maqal lagu maqal maqalka dhagaha
Xiaomi ayaa leh qaaday magaalada Madrid si ay u soo bandhigaan Xiaomi Mi A2 oo la filayo, dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo ka madhan maqal maqalka dhagaha. Way ku adkaan doontaa Xiaomi inay furato Mi A1 hore, mid ka mid ah taleefannada ugu wanaagsan ee la bilaabay sanadihii la soo dhaafay xagga qiimaha lacagta.
Xiaomi Mi A2 sidoo kale waa lagu gartaa maanka ku haynta barnaamijka gaarka ah ee MIUI laftiisa oo ka socda shirkadda Shiinaha, si ay ugu roonaato Android One, oo ah nooc gebi ahaanba nadiif ah oo ah OS-ka inta badan lagu rakibay meeraha. Waxaan ogaan doonnaa faahfaahinta mid ka mid ah taleefannada ugu caansan sanadka.
1 Xiaomi Mi A2, taleefan la awoodi karo oo wata qalab aad u fiican
2 Moobiil Shiineys ah oo wata chicha
3 Mobiil Xiaomi ah oo wata Android One
Xiaomi Mi A2, taleefan la awoodi karo oo wata qalab aad u fiican
Maxaa lagu garwaaqsaday Xiaomi Mi A1 wuxuu riixayay xadka waxa had iyo jeer wuxuu ahaa ereyga ilaaliyaha shirkadda Shiinaha: ka hel qiimaha ugu fiican lacagta taleefanka gacanta. Tani waa sababta Xiaomi Mi A2 ayaa kor u qaaday rajadaas, inkasta oo ay sii socon doonto iyada oo aan la maqal maqalka si loogu laabto isku xirka nooca USB-ka ee ujeeddooyinkan.
Mid kale oo ka mid ah dhinacyada cajiibka ah ee cusub ee Xiaomi Mi A2 waa taas iska ilow furayaasha jirka si aad ugu sameysid shaashadda. In kasta oo aysan xitaa kuwaa jirin, haddana naqshadeynta waxay noqoneysaa "shaashad buuxda" sida shirkadaha kale qaarkood ay mobilada u wataan. In the Xiaomi Mi A2 waxaan leenahay cabir wanaagsan oo hoose iyo kore ah oo tilmaamaya naqshada mobilka cusub ee sumadda Shiinaha.
Shaashadu waa 5,99 inji oo leh xalka HDS HD oo buuxa iyo qaabka 18: 9. Halkan waxaa ku socda isbeddelka qaab kaas oo noo oggolaanaya inaan ku ciyaarno waxyaabaha ku jira qaab dheer, in kasta oo ay weli jiraan ciyaaro badan iyo barnaamijyo ka faa'iideysanaya. Sikastaba, waa arin waqti leh.
Moobiil Shiineys ah oo wata chicha
Xiaomi Mi A2 waa mid dhexdhexaad ah oo noo geynaya qashin Qualcomm Snapdragon 660, 4 ama 6 GB oo RAM ah iyo keyd la dooran karo inta u dhexeysa 32, 64 ama 128GB. Halkan waxay si buuxda ugu hoggaansameysaa qalab lagu arki doono ciyaaraha PUBG Mobile si loo hubiyo waxqabadkeeda dhabta ah; halkan qaar ka mid ah khiyaanooyinka dagaalyahan royale aad u fiican.
Muuqaal kale oo xusid mudan oo ku saabsan Xiaomi Mi A2 waa sawir qaadistiisa oo leh a 12 iyo 20 megapixel gadaal laba kamarad ah. Ujeedada kamaradda labaad ayaa ah inaan u isticmaalno sida muraayadda telephoto oo aan markaa u helno sawirro ay waxyeellada cilladdu tahay wax dhab ah. Dhinaca hore waxaan marayaa ilaa 20 megapixels sidaa darteed sawiradaasi waa mid kale oo ka mid ah sheegashooyinka mobilada oo yeelan doona taageerayaal fara badan.
Waxaan ugu dambeyntii la tagnay awoodda batteriga ee Xiaomi Mi A2 taas wuxuu gaaraa ilaa 3.010 Mah iyadoo si dhakhso leh looga bixiyo 'QuickCharge 3.0', sidaa darteed waxaan horeyba u dhihi karnaa inay aad ugu sii fiicnaan doonto batteriga, sidoo kale waxay leedahay Snapdragon 660 oo fulisa waxtarka tamarta weyn.
Nidaamka Hawlgal Android 8.1 Oreo - mid Android ah
Screen 5.99 inji - IPS HD oo buuxa
Cufnaanta de pixels by inji 403 ppi
Gacaliye Qualcomm Snapdragon 660 12nm 8-core 2.2GHz Adreno 512 GPU
RAM 4GB ama 6GB
Kaydinta gudaha 32/64/128 GB lagu ballaarin karo iyada oo loo marayo kaarka xusuusta microSD
Muuqaal maamulaha Dual 12 MP IMX486 + 12 MP IMX376
Muuqaal Frontal 20MP IMX376
Batariga 3.010 mAh lacag la'aan dhaqso ah oo aan laga saari karin Quickcharge 3.0
Cabbirada X x 158 75.4 7.3 mm
Peso Gram 168
Midabada la heli karo Madow - Dahab - Casaan
Tilmaamo kale Dareemida faraha - Xidhiidhiyaha USB-C - Dareemayaasha infrared - Dual SIM -Bluetooth 5.0
Qiimaha 249 - 279 - 349 euro
Mobiil Xiaomi ah oo wata Android One
Mid ka mid ah curyaamiinta ugu weyn ee Xiaomi ee dhagaystayaasha reer galbeedka ayaa helaya lakab u gaar ah MIUI. Tani marwalba wey yara cusleyd waana inaad wax ka qabato. Xiaomi Mi A2 waan ku illoobi karnaa si aan ugu gudubno a nadiifi nooca bilaashka ah qashinka oo dhan oo sidaas ugu raaxee Android Oreo 8.1. Taasi waa sababta Xiaomi Mi A1 hore ugu guuleysatay qeybahan.
Faahfaahinta kale ee Xiaomi Mi A2 waa iyada Dual SIM, dareeraha faraha, infrared, 4G VoLTE, Bluetooth 5 LE iyo culeyskiisa: 168 garaam. Waxaad heli doontaa Xiaomi Mi A2 oo lagu heli karo saddex midab, sida buluug, madow iyo dahab, iyo qiimayaashan nooc kasta oo ka mid ah:
Xiaomi Mi A2 4GB + 32GB: 249 euro.
Xiaomi Mi A2 4GB + 64GB: 279 euro.
Xiaomi Mi A2 6GB + 128GB: 349 euro.
El Xiaomi Mi A2 hadda waa rasmi sidaa darteed waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad ka iibsato mid ka mid ah dukaamada ku yaal dhulka Isbaanishka sidaas darteedna waxaad ku qaadan kartaa mobilo aad u fiican oo fasax ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi Mi A2 hadda waa rasmi: dhexdhexaad weyn, inkasta oo aan maqal lagu maqal maqalka dhagaha
Xiaomi waxay soo bandhigtay Xiaomi Mi A2 Lite, kuwa doonaya xoogaa yar oo noloshooda ah iyo Android One
Tani waa sida Galaxy Note 9 u eegi doono bunni, buluug iyo madow